Ity fanambarana tsiambaratelo ity dia nohavaozina farany tamin'ny 28/06/2021 ary mihatra amin'ny olom-pirenena sy ny mponina maharitra ara-dalàna ao amin'ny faritra ara-toekarena eropeana.
Amin'ity fanambarana tsiambaratelo ity dia manazava ny zavatra ataonay amin'ny angona azonay momba anao izahay https://comme-un-pro.fr. Mamporisika anao izahay hamaky tsara an'ity fanambarana ity. Amin'ny fanodinana anay, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny lalàna momba ny fiainana manokana izahay. Midika izany, ankoatry ny zavatra hafa, fa:
asehontsika mazava ny antony anaovanay ny angon-drakitra manokana. Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ity fanambarana tsiambaratelo ity;
tanjonay ny hametra ny angoninay manokana momba ny angon-drakitra ilaina ho an'ny tanjona ara-dalàna ihany;
izahay no nangataka ny fahazoan-dàlana mazava anao hanodinana ny angon-drakitrao manokana amin'ny tranga mitaky ny fanekenao;
mandray fepetra fiarovana mifanaraka amin'izany izahay mba hiarovana ny angon-drakitrao manokana, ary mitaky ny hitovizan'ny antoko amin'ny fanodinana data ho anay izahay;
manaja ny zonao izahay hijerena, hanitsy na mamafa ny angon-drakitrao manokana raha mangataka izany ianao.
Raha manana fanontaniana ianao na te hahafantatra tsara izay angon-drakitra notazoninay, dia mifandraisa aminay.
1. Tanjona, data ary fe-potoana hitazomana
1.1 Manangona sy manadihady statistika amin'ny fanatsarana ny tranokala.
Ho an'ity tanjona ity dia ampiasainay ireto angona manaraka ireto:
Fitondra-tena ho an'ny mpitsidika
Ny fototra ahafahantsika manodina ity angona ity dia:
Nahazoana ny fanekena
Ny faharetan'ilay resaka
Notehirizinay hatramin'ny faran'ny serivisy ity data ity.
1.2 Afaka manolotra vokatra sy serivisy manokana
2. Fifampizarana amin'ny antoko hafa
Izahay dia mizara izany data izany amin'ireo mpikirakira sy antoko fahatelo hafa izay tsy maintsy ahazoana ny faneken'ireo lohahevitra angon-drakitra. Momba ity fizarana manaraka ity:
Tanjona: fiaraha-miasa amin'ny orinasa
Ny angona: Fampahalalana mifandraika amin'ny fitetezana sy ny hetsika natao tamin'ny tranokalan'ny mpiara-miasa.
Mampiasa cookies ny tranokalanay. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny cookies, azafady mba jereo ny anay Politikan'ny cookies.
Izahay dia manara-maso ireo antontan'isa tsy fantatra anarana mba hahalalantsika ny faharetana sy ny fomba ampiasan'ny mpitsidika ny tranonkalantsika. Voasakanay ny fampidirana ireo adiresy IP feno.
Manolo-tena amin'ny fiarovana ny angona anay manokana izahay. Mandray fepetra fiarovana mifanaraka amin'izany izahay mba hamerana ny fanararaotana sy ny fahazoana miditra tsy ara-dalàna amin'ny angona manokana. Izany dia miantoka fa ny olona ilaina dia tsy mahazo miditra amin'ny angon-drakitrao, ary arovana ny fidirana amin'ny angon-drakitra ary dinihina matetika ny fepetra fiarovana anay.
6. Tranonkala antoko fahatelo
Ity fanambarana tsiambaratelo ity dia tsy mihatra amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo mifandray amin'ny rohy ao amin'ny tranonkalantsika. Izahay dia tsy afaka manome toky fa ireo antoko fahatelo ireo dia mitantana ny angon-drakitrao manokana amin'ny fomba azo antoka na azo antoka. Mamporisika anao izahay hamaky ny fanambarana tsiambaratelo momba ireo tranonkala ireo alohan'ny hampiasanao azy ireo.
7. Fiovana amin'ity fanambarana tsiambaratelo ity
Izahay dia manan-jo hanova an'ity fanambarana tsiambaratelo ity. Manolo-kevitra anao ny hijery matetika an'io fanambarana momba ny tsiambaratelo io mba hahafantaranao ny fanovana mety hitranga. Ho fanampin'izay, hampahafantatra anao mavitrika izahay isaky ny azo atao.
8. Midira sy manova ny angona azonao
Raha manana fanontaniana ianao na te hahafantatra izay angon-drakitra manokanay momba anao dia mifandraisa aminay. Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fampahalalana etsy ambany. Ireto avy no zonao:
Manan-jo hahafantatra ny antony ilana ny angon-drakitrao manokana ianao, izay hanjo azy io ary mandra-pahoviana no hitahirizana azy.
Zo fidirana: manan-jo hiditra amin'ny angon-drakitrao manokana izay fantatray ianao.
Zon'ny fanitsiana: manan-jo amin'ny fotoana rehetra ianao hamenoana, hanitsiana, hamafana na hanakana ny angona anao manokana
Raha manome anao ny fanekenao amin'ny fikirakirana ny angon-drakitrao ianao, dia manan-jo hanafoana io fanekena io ary hamafa ny angon-drakitrao manokana.
Zo hamindra ny angon-drakitrao: manan-jo hangataka ny angon-drakitrao manokana avy amin'ny mpanara-maso ianao ary hamindra azy tanteraka amin'ny mpanara-maso hafa.
Zo manohitra: azonao atao ny manohitra ny fanodinana ny angon-drakitrao. Hanaraka izahay, raha tsy misy antony an'io fitsaboana io.
Alao antoka fa hazavainao foana hoe iza ianao, mba hahafahanay mahazo antoka fa tsy manova na mamafa ny tahirin-kevitr'ilay olona diso izahay.
9. Manaova fitarainana
Raha tsy afa-po amin'ny fomba fitantanana (fitarainana momba) ny fikirakirana ny angon-drakitrao manokana ianao, dia manan-jo hametraka fitoriana amin'ny tompon'andraikitra fiarovana data.
10. Mpiaro ny data
Ny tompon'andraikitra amin'ny fiarovana anay dia voasoratra anarana amin'ny manampahefana miaro ny angona ao amin'ny fanjakana mpikambana EU. Raha manana fanontaniana na fangatahana momba an'ity fanambarana momba ny fiainana manokana ity ianao na ho an'ny Data Protection Officer, dia azonao atao ny mifandray amin'i Tranquillus, amin'ny alàlan'ny tranquillus.france@comme-un-pro.fr.
11. Antsipirian'ny fifandraisana